Inhloko ZeNdaba Nkwenkwezi 31, 2021
Ezinye izibhedlela kazisela majekiseni e Covid-19 ngesikhathi uzulu efuna ukuhlatshwa. Ngesikhathi abantu sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa- 670,755, asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eyeCovid 19 Vaccine, eZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu-341,218, asebehlatshwe ijekiseni yesibili.
Abafundi ezikolo zeGwanda babiselwe emakhaya lamhlanje ngenxa yodubo lwamanzi kulandelwa ukuvalwa kwamagetsi eZinwa ngenxa yesikwelede.Esibhedlela esikhulu seGwanda abagula belaliswe kulesisibhedlela balakho ukubiselwa emakhaya nxa loludubo lwamanzi lungalungiswanga.
Udaba lwentathelizindaba ebotshwe ngeviki edluleyo phezu kodaba lokuphathisa intathelizindaba zeleMelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni, uJeffery Moyo, luqhubekele phambili emthethwandaba namuhla.
EleSouth Africa selingene kulockdown level 2 kulandela ukuqansa lakhulu kwenani lalabo abahlaselwa yicoronavirus.
Ku Livetalk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kuCovid 19, eye Vaccine eZimbabwe.